साहित्य | Nepal Desh
३ मंसिर, लण्डन । नेपाली साहित्यकार कविताराम श्रेष्ठ (रामबहादुर श्रेष्ठ) को आज वेलायतमा निधन भएको छ । नेपाली साहित्यमा अस्वीकृत आन्दोलनका अगुवा श्रेष्ठको निधन क्यान्सर रोगका कारण भएको हो । उन...	Read more
५ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘त्रिमूर्ति सम्मान र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी पदक’ ग्रहण नगर्ने भएका छन् । त्रिमूर्ति निकेतनले...	Read more
४ साउन, काठमाडौं । राजसंस्था सर्वशक्तिमान रहेको वेला राजपरिवारको चाकडी र चाप्लुसी गरेर धन कमाएकाहरुले अब साहित्य सेवा गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई साहित्यिक पुरस्कार प्रद...	Read more
भानुलाई माल्यार्पण गरेर सुरु हुने छ प्रधानमन्त्री देउवाको १ दिन, पुरानो रुटिङ फेरियो
२८ असार, काठमाडौं । नेपाली भाषाका माध्यमबाट नेपाली जनतालाई एकतामा बाँध्ने कवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती असार २९ गते हो भन्ने कुरा आम नेपालीलाई थाहा छ । यो दिन देशभर भानुका सम्झनामा कार्यक...	Read more
डा. माधवप्रसाद पाण्डे	Read more
गाउँमा हाट लागेको छ । रङ्गीविरङ्गी कपडा, खेलौना कचेडी मुरै सबथोक चौरमा बिक्रीका लागि राखिएका छन् । रामजनम अम्बा बेच्न आएको छ । आज ऊसँग उसकी छोरी रीतबा पनि आएकी छे । हाट बिस्तारै बिस्तारै बाक...	Read more
बिप्रिन्दु लेखनाथ चोकबाट माइक्रो बस चढ्दा करिब दिउँसोको चार बज्न लागेको थियो । मेरो मन एक तमासले आत्तिएको थियो, बेलुकीको यात्रा, खराब बाटो अनि अलि विसन्चो शरीरका कारण मन गरुङ्गो भैरहेको थियो...	Read more
यो उजाड उजा जिन्दगानी भोली अवस्य हुन्छ खरानी दिनपछि रात अवस्य आउंछ जन्मेपछि अवस्य मर्नुपर्दछ दुइदिने जिन्दगनीमा किन राख्ने वैरभाव ? सक्छौ भने किन नछोड्ने एकआपसमा प्रभाव बगेको खोलो फर्केर आउं...	Read more
भिडमा समेत चर्चा सुनेपछि के गरिन सर्वदाले
अनवरत जिन्दगीमा कयौ सपना बुनेको छु । सुख दुःख बाड्न भनी तिमीलाई चुनेको छु ।। गोधुलीमा संगै हिड्न तिम्रो साथ जाती लाग्यो ।।। त्यसैले त मायाँको फुल धागोले उनेको छु ।।।। भिडमा सधै तिम्रो नै चर्...	Read more